people Nepal » अब जनप्रतिनिधि पनि कारबाहीको खतरामा! अब जनप्रतिनिधि पनि कारबाहीको खतरामा! – people Nepal
अब जनप्रतिनिधि पनि कारबाहीको खतरामा!
काठमाडौँ, २० मंसिर । निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका ३४ हजार जनप्रतिनिधिसहित ६ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने खतरा बढेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयमा नबुझाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
यसैगरी, विश्वविद्यालयबाट पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या उल्लेख्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै, शिक्षक किताबखानाले कुनै पनि शिक्षकको सम्पत्ति विवरण केन्द्रका पठाएको छैन। सतर्कता केन्द्रका अनुसार निजामती किताबखानाले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउने ८२ हजार निजामती कर्मचारीको विवरण प्राप्त भएको छ। यसैगरी, सेनाबाट ९१ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ३३ हजार र जनपद प्रहरीबाट ६५ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। अन्नपुर्णपोस्टमा खबर छ ।